Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 30, 2019 00: 35 No Comments
Mid waa mid xun: waa xanaaq, xaasidnimo, murugo, murugo, is-dulqaad, is-necbaan, dembi, xishood, liidasho, been, been abuur, sare iyo dulqaad.
Kan kale waa fiican yahay: isagu waa farxad, nabadda, jacaylka, rajada, hufnaanta, sharafnimada, wanaagga, roonaanta, xishoodnimada, deeqsinimada, runta, naxariista iyo iimaanka. Isla dagaalku wuxuu ku dhacaa adiga iyo qof walba.
Wiilku wuxuu u maleeyay daqiiqad, ka dibna wuxuu weydiistay awoowe:
waxa Goolku ma guuleysan doonaa?
Da ' Cherokee si fudud u jawaabay:
Midka aad quudiso. Waxaan nahay kuwo wanaagsan oo xun. Waxaan jecelnahay inaan fiicneyno, laakiin ma ahan qaabka aadanaha. Oo waa inaan ku noolnahay labada naadi.
Laakiin waxa anaga noo muhiim ah markaa waa inaan ka fiicnaano waxa xun, taas oo miisaanku ku tilmaamayo dhinaca midig.
Sheekadani, aad u sahlan in la xusuusto, waxay nagu xasuusin kartaa maalin kasta in dheelitirka uu ku tilmaamayo dhinaca aan mudnaanta siineyno. Wuxuu inaga nuugaa in maalin maalmaha ka mid ah murugadu ay tahay rubuc saacad ah oo farxad ah oo ay tahay in la xasuusto laguna beero!
INANA: muuqaalka zoomorphic ee Inana ilaaha Sumerian ee Jacaylka iyo Dagaalku waa Libaaxyada iyo Owlsiyada "Owls waxaa lagu yaqaanaa aragtidooda habeenimo iyo waxyaabaha lagu arko mugdiga marka loo eego noolaha badankooda. ma arki karaan indhahooda iyo libaax xooggiisa "
Sep29 10: 16